नजिक न्युज | महिनावरीको पीडा : असामान्य स्थितिको संकेत
महिनावरीको पीडा : असामान्य स्थितिको संकेत
तपाईंलाई पनि कहिलेकाहीँ पिरियडको समयमा केही परिवर्तन भएको महसुस हुन सक्छ । तपाईं पहिलेभन्दा यो समयमा अधिक जंक फूडमा ध्यान दिनुहुन्छ वा यस समयमा तपाईंलाई पहिलेभन्दा धेरै दुस्खाइ महसुस हुन सक्छ । महिनावारीको समयमा यदि यस्तो समस्या हुन्छ भने यस्तो अवधिमा लिएको तनावले दुखाइमा असर गर्ने गर्छ । जबदेखि कोरोना महामारी सुरू भएको छ, मानिसहरूमा तनाव र निराशाको स्तर धेरै वृद्धि हुन्छ । त्यसले बिरामी हुने सम्भावनालाई त्यति नै बढाउने गर्छ ।
नजिकका आफन्तहरूलाई भेट्न नसक्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता र रोजगारी गुमाउने र व्यवसाय गुमाउनुले पनि त्यस्तो चिन्ता बढ्ने गर्छ । यी सबै कारणहरूले दुवै महिला र पुरूषको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ । तर महिलामा यसको प्रभाव उनीहरूको अवधि, गर्भावस्था आदिमा पनि देखिएको छ । केही रिपोर्टका अनुसार तनावमा परेका महिलाहरूले आफ्नो अवधिमा चिन्तामुक्त महिलाहरूको भन्दा बढी मासिक झमेलाको महसुस गरिरहेका हुन्छन् । यदि तपाईंलाई महिनावारीको समयमा अधिक दुखाइ छ भने केही महत्त्वपूर्ण कुरा र घरेलु उपचारहरू हुन्छन्, जसबाट राहत पाउन मद्दत गर्छ ।
– कम्मर र फिलाको दुखाइ
– तल्लो पेटमा दुखाइ
– नर्भस र अप्ठ्यारो महसुस
– टाउको दुखाइ आदि ।
कस्तो अवस्थामा जाने चिकित्सक कहाँ ?
जब माथि उल्लेखित लक्षणहरू निको हुनेभन्दा बढ्दो क्रममा आउँछ । यस्तो अवस्थामा डाक्टरलाई भेट्नु र यसको कारण पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसबाहेक समय सीमा सकिएपछि पनि यदि दुखाइ जारी रह्यो वा माथिका लक्षणहरू महसुस भइरह्यो भने डाक्टरको सल्लाह आवश्यक हुन्छ।
उपचारको लागि के गर्ने ?
यदि दुखाइ धेरै गम्भीर छ भने तपाईंले डाक्टरको परामर्शपछि पेन रिलिभरहरू जस्तै आइबुप्रोफेन लिन सक्नुहुन्छ । तपाईंले पक्कै पनि उनीहरूबाट राहत पाउनुहुनेछ । त्यहाँ केही उत्पादनहरू उपलब्ध हुन्छन् जुन तपाईंले पेट दुख्ने समस्याबाट राहत पाउनुहुनेछ ।
केही केसहरूमा डाक्टरहरूले पनि गर्भाधारण रोक्न हार्मोनल जन्म नियन्त्रक पिलहरू लिन सल्लाह दिन्छन् । यसले मासिक रक्तस्रावलाई केही हदसम्म राहत दिलाउन सक्छ ।
तपाईंले आईयूडी प्रयोग गर्नुभयो भने पनि तपाईं यो पीडाबाट केही राहत पाउन सक्नुहुन्छ । यदि यो पीडा एक चिकित्सा अवस्थाको कारणले भएको हो भने त्यतिबेला तपाईंले डाक्टरको सहयोग लिएर शल्य चिकित्साको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ ।
पीडा रोक्ने प्राकृतिक तरिका
यदि तपाईं आफ्नो महिनावारीको अवधिमा दुखाइ कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा पनि केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
– दैनिक व्यायाम सुरु गर्नुहोस्।
– योग वा ध्यानद्वारा तनाव कम गर्नुहोस्।
– मदिरा पिउने एवं धुम्रपान कम गर्नुहोस्।
– योग र अक्युपञ्क्चर विधि पनि प्रयास गर्न सकिन्छ।
– अवधि दुखाइ कम गर्न केही घरेलु उपचारहरू अपनाउन सकिन्छ ।
– मस्तिष्कलाई आराम।
– आफैँलाई अधिकतम शारीरिक गतिविधिमा समावेश गर्नुहोस्।
– मसाज लिन सक्नुहुन्छ ।
– तातो पानीले नुहाउनुहोस् ।
महिनावारीको दुखाइ कम गर्ने केही आयुर्वेदिक उपचारहरू
क्यामोमाइल चियामा एन्टिस्पास्मोडिक, एन्टि(इन्फ्लेमेटरी र एन्टिआक्सिडेन्ट गुणहरू छन्। जसले ऐठन जस्तो समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।
अदुवाले पनि तपाईंको पीडा कम गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साधारणतया, अदुवामा एन्टी(इन्फ्लेमेटरी र एनाल्जेसिक गुणहरू पर्याप्त हुने गर्छ।
ल्याभेन्डर तेल वा उपचारमा प्रयोग गरिएको कुनै पनि अन्य आवश्यक तेलले अन्य समयको जस्तै पिरियड्सको दुखाइ कम गर्छ ।
शुक्रबार ०७, फागुन २०७७ ०८:४९ मा प्रकाशित